Ny fanesorana vovoka amin'ny vy amin'ny gamma-butyrolactone
Homeportfolio-Ny fanalana vovoka amin'ny vy miaraka amin'ny GBL
Ny fanesorana ny harafesina dia mety ho be dia be ny asa
Rehefa tsy arovana ny vy dia mora tohina amin'ny harafesina. Ny fanesorana ny harafesina amin'ny vy dia mety ho asa mafy sy sarotra. Ny torohevitray dia rehefa manomboka mivoatra ny harafesina amin'ny vy dia tsara raha esorina haingana araka izay azo atao izany. Gamma-butyrolactone dia mety rehefa ampiharina amin'ny dingana voalohany dia tena hahomby amin'ny fanesorana ny harafesina mora amin'ny vy. Rehefa tara loatra ianao ka manomboka amin'ny fanesorana ny harafesina amin'ny vy dia ho mafy kokoa ary mety hanimba maharitra ny vy. Mety handany vola be izany amin'ny tranga sasany. Faly miaraka amin'ity mpanadio ity, ny fanesorana ny harafesina sy tasy amin'ny vy dia tsotra esorina. Voalohany indrindra ho an'ny fanesorana ny harafesina mahomby dia ilaina ny mametraka gamma-butyrolactone vitsivitsy amin'ilay sombin-kazo, izay manomboka miparitaka ny harafesina. Avelao eo mandritra ny enim-polo minitra eo ary hamafa amin'ny lamba maina na lamba famaohana taratasy ny harafesin'ny metaly. Tadidio fa azonao antoka fa tsy misy residu gamma-butyrolactone tavela amin'ny vy. Soso-kevitra ny hitandrina tsara mba hisorohana ny fahasimbana amin'ny vy. Ny fanesorana ny harafesina eo am-piandohana dia afaka mitahiry ezaka be ary koa vola. Raha toa ka lava ny lava ny harafesina amin'ny vy, mety tsy ho afaka intsony ny fanesorana ny harafesina. Avy eo ny vy dia ho simbaina mafy. Gamma-butyrolactone dia iray amin'ireo safidy azo antoka indrindra hanalana ny tasy mafy loha. Izany:
- Tsy misy poizina.
- Tsy mirehitra.
- Miscible amin'ny rano.
- Tsy mahery setra ho an'ny hoditra, manaova fonon-tànana vita amin'ny fingotra (fingotra) atolotra!
Manala ny menaka, ranomainty, hosodoko, varnis ary menaka amin'ny mason-tany malefaka. R22 - Manimba raha atelina. R36 - Mahasosotra ny maso. S39 - Fiarovana amin'ny tarehy / maso. S26 - miaraka amin'ny maso: Avy hatrany mamoaka rano be dia be ny maso ary mangataha torohevitra ara-pitsaboana. S45 - Raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao na mahatsapa tsy salama dia mangataha torohevitra ara-pitsaboana avy hatrany (raha azo atao dia asehoy ny marika.)
Aza ampiasaina mitambatra amin'ireo vokatra fanadiovana hafa!
Ataovy ao anaty fitoerana mihidy mihidy ao anaty toerana mangatsiatsiaka sy maina tsy misy fangarony.
Raha mifandray amin'ny biodegradability Gamma butyrolactone ao anaty rano, dia manoro hevitra anao izahay haka ny vahaolana fiasana ilaina ilaina hanomanana mialoha sy handevona azy. Rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hivadika ho rano io solitany io mandritra ny fotoana maharitra mandritra ny fotoana maharitra ary ho rava ka ho very ny vokatra fanadiovana.
Mitandrema! GAMMA BUTYROLACTONE TENA MATAHOTRA ARY FATAL RAHA TOVO!